At Thingyan 2010, there wasabomb explosion near Kandawgyi Kanpat Road. In my entire life, nothing like that had happened before. As I live on Bagaya Street, Sanchaung, I heard it clearly. During Thingyan, I usually take photos from my home on the sixth floor. I gainadifferent perspective on people moving about. At the time of the explosion I hadacamera ready, so I managed to take some photos of sudden changes among the people down below. They started to worry ifabomb might explode in their neighbourhood. They became silent. They didn’t dare continue their journeys. They called to their children. They went to offer help. Photojournalists who did that were arrested. In other countries, journalists take photos and people offer help in times of terrorism and natural disaster. In Myanmar, though, everyone near the explosion was arrested on suspicion of complicity. When I discussed my Milan show with the curator, I decided to relate my paintings to this subject as much as possible. That’s why this painting ringsabell for me. It shows municipal workers going around in Thingyan. They were dressed in municipal uniforms and looked happy on their truck until they heard about the bomb explosion. Then they could no longer carry on with their journey.
I believe the changes in the decade from the old to the new government are not visible enough. It’s hard to say what changes I want to see. Even inacountry like America, where democracy and human rights are respected, the issues in 2020 are like movie scenes. So it’s difficult for us to give our opinion.
At home, I’m not regarded as an artist. I rarely do shows in Myanmar. I don’t think of paintings as my lifeblood. I create them when I haveadesire or inspiration. On the other hand, I do make sculptures, photo-based art, installation art and films. I always change my mind when it comes to art. Back then, I soldalot of paintings from the ‘We Are Moving’ series. Some were bought by the world-renowned collector Uli Sigg. But I think it’s boring to keep making one style of artwork. I believe we should create and make changes based onaconcept,aplace, our age and our surroundings.
၂၀၁၀ သင်္ကြန်မှာ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းမှာ ဗုံးပေါက်တယ်။ ကျနော့် တစ်သက်တာ သင်္ကြန်မှာ ဗုံးပေါက်တယ်ဆိုတာ တစ်ခါမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ကျနော်က စမ်းချောင်း ဗားကရာလမ်းမှာ နေတာဆိုတော့ ဗုံးပေါက်သံကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြီးကို ကြားလိုက်တယ်။ ကျနော်က သင်္ကြန်ဆိုရင် ကျနော့်အိမ် အပေါ်ထပ် ခြောက်လွှာကနေ ဓာတ်ပုံရိုက်လေ့ရှိတယ်။ သင်္ကြန်မှာ လူတွေ လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ မြင်ကွင်းကို တစ်မျိုးမြင်ရတာပေါ့။ ဗုံးပေါက်ကွဲတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်နားမှာလည်း ကင်မရာ အလွယ်တကူရှိနေလို့ အပေါ်စီးကနေ လူတွေရဲ့ ရုတ်တရက်ပြောင်းသွားတဲ့ အခြေအနေကို ရယူလိုက်နိုင်တယ်။ လူတွေက ငါတို့နေရာမှာလည်းပေါက်မှာလားဆိုပြီး စိုးရိမ်လာကြတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ရုတ်တရက်ကြီး တိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ သွားနေတဲ့သူကလည်း ဆက်မသွားရဲတော့ဘူး။ မိဘတွေလည်း သူတို့သားသမီးတွေဆီကို တယ်လီဖုန်းအပြေးအလွှားဆက်ကြပေါ့။ ကူညီဖို့ သွားတဲ့သူတွေ သွားကြတယ်။ ဓာတ်ပုံ သတင်းထောက်တွေ အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာဆို အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရင် သဘာဝဘေးဖြစ်ရင် ဂျာနယ်လစ်တွေ ဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့ အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေက ကူညီတာမျိုး လုပ်လေ့ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက ဗုံးပေါက်တဲ့အခါ တွေ့ရာလူကို ဗုံးနဲ့စပ်ဆက်တယ်ဆိုပြီး ဖမ်းခဲ့တယ်။ အီတလီ မီလန်မြို့က ကျနော့်ရဲ့ ရှိုးပွဲအတွက် curator နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပန်းချီကားတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရေးမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို ဒီပန်းချီကားက ကျနော်အတွက် မှတ်မှတ်ရရဖြစ်တယ်။ အခုပြောနေတဲ့ ပန်းချီကားက စည်ပင်လုပ်သားတွေ သင်္ကြန်လည်တဲ့ပုံပါ။ ကားကြီးပေါ်မှာ စည်ပင်ဝတ်စုံတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ပြီး လာခဲ့ကြတာ။ ကျနော်တို့ နားလည်းရောက်တော့ ဗုံးပေါက်တယ်ဆိုတော့ ရှေ့ဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူး။
အစိုးရအဟောင်းနဲ့ အစိုးရအသစ်ရဲ့ကြားမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း အပြောင်းအလဲက မြင်သာထင်သာ မရှိသေးဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ မြင်ချင်တဲ့ အပြောင်းအလဲကတော့ အခုအချိန်မှာ ပြောဖို့ခက်တယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အင်မတန် ထွန်းကားပါတယ်ဆိုတဲ့ အမေရိကန်မှာတောင် ၂၀၂၀ မှာ ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေက ရုပ်ရှင် ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုနဲ့ တူတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အတွက် သုံးသပ်ဖို့ ခက်တယ်။
ပြည်တွင်းမှာတော့ ကျနော့်ကို ပန်းချီဆရာလို့တောင် မသတ်မှတ်ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ကျနော်က ပြပွဲတွေလည်း တော်ယုံတန်ယုံမလုပ်ဘူး။ ပန်းချီကားတွေကိုလည်း ကျနော် အသက်ရှင်နေတဲ့ ပင်မ ရေစီးကြောင်းအနေနဲ့ မမှတ်ယူထားဘူး။ ဆန္ဒရှိတဲ့အချိန် အာရုံတစ်ခုခုကျနော့်ဆီ ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ပန်းချီကားကို ထဆွဲတာ။ တခြားဘက်မှာ ပန်းပုရုပ်တွေ၊ ဓာတ်ပုံအသုံးပြုတဲ့ အနုပညာတွေ၊ installation art တွေ၊ ရုပ်ရှင် လုပ်တာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ကျနော့်စိတ်က ပန်းချီနဲ့ပတ်သက်ရင် အမြဲပြောင်းတယ်။ We Are Moving ပန်းချီကားတွေဆိုရင်လည်း အဲ့တုန်းက တအားရောင်းရတယ်ဗျ။ အဲ့စီးရီးထဲက တချို့ပန်းချီကားတွေကို ကမ္ဘာကျော် စုဆောင်းသူ Uli Sigg ကအစ စုဆောင်းခဲ့တယ်။ အနုပညာသမားတစ်ယောက်က လက်ရာတစ်ခုတည်းကို ဖန်တီးနေတာက ပျင်းဖို့ ကောင်းတယ်လို့ ယူဆတယ်။ concept တစ်ခု နေရာဒေသတစ်ခု ကိုယ်ရောက်လာတဲ့ အသက်အရွယ်တစ်ခု ကိုယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ တစ်ခုမှာ လှည့်လည်ပြီး အပြောင်းအလဲလုပ်ပြီး ကျနော်တို့က ဖန်တီးရမယ်လို့ ယူဆတယ်။